बीपीमा थप एक संक्रमितको मृत्यु
विराटनगर, १६ भदौ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थप एक जना कोरोना भाइरस संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
सिराहको मिर्चैया ३ का ६५ वर्षीय पुरुषको सोमबारराति ८ः४५ बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए । पुरुषलाई विराटनगरस्थित विराट शिक्षण अस्पतालबाट भदौ १० गते धरान रेफर गरिएको थियो । मृतकमा ज्वरो आउने, अत्याधिक टाउको दुख्ने, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या रहेको बताइएको छ ।
उनमा मधुमेह र उच्च रक्तचापको पुरानो समस्या रहेको डा. सापकोटाले बताए । उनका अनुसार भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएका र दुई पटकसम्म डाइलासिस गरिएका पुरुषको शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरु निश्क्रिय रहेका थिए । मृतकमा भदौ ९ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
हालसम्म बीपीमा कोरोना संक्रमित १७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोनाका कारण प्रदेश १ मा उपचाररत ३३ जनाको हालसम्म मृत्यु भइसकेको छ । जसमा प्रदेश १ का २३ र प्रदेश का १० जना रहेका छन् ।